Etu esi kenye ugwo na Treasury nke ecommerce m? | ECommerce ozi ọma
Etu esi kenye ugwo na Treasury nke ecommerce m?
José Ignacio | | eCommerce, Ụzọ ịkwụ ụgwọ
Gwọ, ma na afọ ofufo na Executive oge, nwere ike yigharia ma ọ bụ kewaa ke usoro guzosie ike site ụkpụrụ, na-arịọ nke onye ụtụ isi, mgbe ọnọdụ akụ na ụba gị na-egbochi gị ịkwụ ụgwọ n'ime oge a kara aka.
Iji hazie mbughari ụgwọ na Internetntanetị, nweta nhọrọ "tgwọ ụgwọ na nkewa" nke dị na ngalaba "Usoro Pụtara" nke Officelọ Ọrụ Electronic. I nwekwara ike ịnweta site na "Nchịkọta" na ngalaba "Usoro niile" na "Nkwupụta na nkewa", na Electlọ Ọrụ Electronic.
Ihe ọmụma a rịọrọ bụ: koodu mmezi, ego, ụdị nkwa (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa), akaụntụ ụlọ akụ debit, ọnụọgụ ego, oge, ụbọchị nke ntinye mbụ na ihe kpatara arịrịọ ahụ. Mgbe n'aka nke ọzọ, ego nke ịkwụ ụgwọ bụ kpọmkwem debit, ma e wezụga NIFs na-amalite site na akwụkwọ ozi E, H na U. N'ihi na ndị a NIFs, hapụ akụ na akaụntụ nkọwa oghere. Ofbọchị nke okwu mbụ ga-abụ 5th ma ọ bụ 20 nke ọnwa nke kwekọrọ na njedebe nke okwu ma ọ bụ akụkụ dị nta ma ọ bụ azụmahịa na-esote ozugbo. Ozugbo ejupụta data ahụ, pịa "Nabata".
1 Paymentskwụ ụgwọ ụtụ: mgbatị
2 Kedu oge ị ga - emezu?
3 Kalenda ịkwụ ụgwọ
4 Taxestụ ndị ọzọ iji kwusaa
5 Kù ka ị gbuo oge ịkwụ ụgwọ
6 Mentkwụ ụgwọ nkwupụta
Paymentskwụ ụgwọ ụtụ: mgbatị
N'ezie, ị na-atụle ugbu a ụdị ụtụ isi enwere ike ibigharị site ugbu a gawa. Otu n'ime ụtụ isi nwere ike ibigharị bụ mpaghara Nke ọ bụla n'ime ụtụ isi nke onwe gị ma ọ bụ VAT, ụgwọ kwa afọ na ọbụlagodi gara aga anyị nwere ike ịnwe na Nchịkwa.
Banyere nloghachi ụtụ ego na-enweta kwa afọ, ọ nwere usoro ịkwụ ụgwọ nke ya ma nyefee ohere ịkwụ ụgwọ 2. Mana ekwesiri iburu n'uche na ugwo ego nke ụtụ a enweghi ike yighari. Mgbe n'aka nke ọzọ, Enweghi ike iguzigharị ego ụtụ ego nke onwe, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ndị pụrụ iche, enyerela ya.
Oge na-abịa mgbe ị maara ihe bụ isi chọrọ ị ga-emerịrị iji mee mmeghari ndekọ ego ndị a na akaụntụ nchekwa gị. Nke mbụ, iji rịọ ka e yigharịrị ọ dị mkpa iji gosipụta na anyị nwere nsogbu ego. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, anyị nwere ike ịkọwa na yigharịrị oge kwuru.
N'aka nke ọzọ, ị ga-eburu n'uche na ndị niile na-arụrụ onwe ha ọrụ nwere ike ịrịọ ka ụgwọ nke ịkwụ ụgwọ na Gọọmentị, ma ha na-atụ ụtụ isi nke onwe ha ma ọ bụ ndị ụtụ isi Corporation na-atụ ụtụ. Ya mere, olee mgbe m nwere ike ịrịọ yigharia? N’echiche ahụ, a ga-arịọ arịrịọ maka yigharia ma n’ime oge obibi afọ ofufo ụtụ dị ka oge ndị isi. Ekwesiri ighota na mgbe anyi no na oge mgbochi, o nwekwaghi ike iju arighari, obu ezie na anyi nwere ike kparita uka ka aga esi kwuo ugwo a.
Kedu oge ị ga - emezu?
Ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ elektrọnik ma ọ bụ usoro cl @ ve PIN, ịnwere ike ịnye arịrịọ ntụgharị oge site na weebụsaịtị weebụsaịtị Agency. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịrụ ọrụ ntanetị, ịnwekwara ike ịnye ngwa ahụ n'onwe gị n'ụlọ ọrụ ndị kwekọrọ na gị. Banyere ụtụ isi nke kwekọrọ na obodo ndị kwurula, ọ dị mkpa ịnye arịrịọ ahụ na Nchịkwa kwekọrọ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị mkpa mgbe niile itinye akwụkwọ maka ụtụ isi ọ bụla. N'ime ya, ị ga-ezipụta ego nke ụgwọ ahụ, ihe kpatara ịrịọ ka a yigharia ya na usoro ịkwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ụgwọ ahụ bụ erughị 30.000 euro Ọ dịghị mkpa iji nye mmesi obi ike ma nyefee nkwụghachi na akpaghị aka. Ma ọ bụrụ na ụgwọ karịrị 30.000 euro, ọ dị mkpa ịnwe nkwa, nkwa nnyefe ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi. Ọ dị mkpa ịnye ihe akaebe, dịka ọmụmaatụ nke akwụghị ụgwọ na ịnwale mkpokọta n'ihe banyere VAT.
Kalenda ịkwụ ụgwọ
Na usoro ọzọ, ọ dị mkpa iji mesie ya ike na Gọọmentị na-ewepụta ọnwa nke ọnwa 12 maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ na ndị ọrụ onwe ha na nke ọnwa 6 maka SMEs. Banyere akụkụ a, ndị ịkwụ ụgwọ kalenda na anyị na-atụ aro nwere ike ịnabata ma ọ bụ jụ. Treasury nwere ike ịnye kalenda ọzọ iji kwado nkewa. Ma ọ bụrụ na ajụrụ ya, a ga-anata ụgwọ nke ụgwọ zuru oke nke a ga-akwụ ụgwọ n'ime oge a kara aka.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na anyị akwụghị ụgwọ, Treasury ga-ezitere anyị ọkwa iji kwụọ ụgwọ nke akwụghị ụgwọ. N'okwu a, ego a ga - abawanye site na ihe dịka 20% kwekọrọ na mgbakwunye mmachibido iwu, mana ọ bụrụ na a kwụọ ụgwọ ya n'ime oge ewepụtara, ego a ga - ebelata.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na akwụghị ịkwụ ụgwọ ahụ, Akụ ahụ ga-akagbu yigharia ma bido usoro mmanye, na-enwe ike ịme iwu.
Taxestụ ndị ọzọ iji kwusaa
N'aka nke ọzọ, kalenda ego maka nkeji iri na ise nke afọ na-egosi ụbọchị ndị ọzọ ndị ụtụ isi ga-atụ ụtụ isi ndị ọzọ. Ọ bụ ikpe nke ego na ụlọ ọrụ nke ahụ ga - abụ dịka okwu enyere na ọnọdụ ndị a kapịrị ọnụ. Ezubere ya maka igbochi na ego n'ihi ego sitere na ọrụ, ọrụ akụ na ụba, ihe nrite na ụfọdụ mbata nke ego, uru sitere na nnyefe ma ọ bụ nkwụghachi nke mbak na nsonye nke ụlọ ọrụ itinye ego na mkpokọta ma ọ bụ iji oke ohia nke ndị agbata obi na oke ọhịa ọha na ego na ịgbazinye ego. ala na ụlọ na ibugharị isi obodo.
N'aka nke ọzọ, na n'ihe gbasara Taxtụ na Ọrụ Ego (Ihe Nlereanya 840), ndị na-atụ ụtụ isi metụtara ụgwọ nke ọnụego a ga-echetakwa ụbọchị nke ha ga-edebanye aha, mgbanwe na nkwupụta ịkagbu, na ndị bụ na-esonụ:
Nkwupụta nke ịhapụpu: otu ọnwa site na mmalite nke ọrụ ahụ. Ọ dabara na ndị na-atụ ụtụ isi bụ ndị na-etinye ntinye ọ bụla etinyere na ụtụ ma gharakwa iru ọnọdụ ndị achọrọ maka itinye ya, na nke a ga-arụ n'ime ọnwa Disemba tupu afọ nke onye a na-atụ ụtụ isi bụ ụgwọ.
Nkwupụta mgbanwe: otu ọnwa site na ụbọchị nke ọnọdụ nke kpatara mgbanwe ahụ mere.
Nkwupụta nke iwepụ: otu ọnwa site na ụbọchị nkwụsịtụ ahụ mere. Maka ndị na-akwụ ụtụ isi na-ekwenye na itinye akwụkwọ nke ihe ọ bụla ewepụtara na ya, na, nke etinyere n'oge ọnwa Disemba tupu afọ a na-ahapụ onye na-atụ ụtụ isi n'ịtụ ụtụ a.
Kù ka ị gbuo oge ịkwụ ụgwọ
Oftù Na-ahụ Maka Taxtụ Ndị Na-atụ Taxtụ (Aedaf) rịọrọ n'oge na-adịbeghị anya ka Agencylọ Ọrụ Taxtụ Taxtụ na-ekwe ka nkwụsị nke ụgwọ ụtụ isi onwe onye na ọnọdụ akụ na ụba dị ugbu a ma na-eburu n'uche na ọnụ ọgụgụ ndị na-akwụ ụtụ isi bụ ndị, n'ihi nsogbu akụ, ga-arịọ ka nkwụghachi esote ụbọchị. N’ihi nke a, ndị ndụmọdụ ụtụ isi na-egosi na yigharị nke ịkwụ ụgwọ, nke ihe niile ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ, nke ụgwọ ụtụ isi bụ omume ndị Agencylọ Ọrụ Taxtụ Isi nabatara maka ndị ụtụ isi ahụ nwere nsogbu ego.
Na ọnọdụ ọnọdụ akụ na ụba ugbu a, ha na-ebu amụma, arịrịọ ndị a nwere ike ịbawanye ụba n'ihi nsogbu ndị na-akwụ ụtụ isi. Dabere na Aedaf, Agencylọ Ọrụ Taxtụ ahụ na-arụ ụka na iwu ụtụ isi ego onwe onye, ​​na edemede 62 ya, gosipụtara ohere nkewawa ego ahụ na 60% na 40%, dị ka ọ dị ugbu a, mana anaghị ewepụta ohere ịmegharị.
Mentkwụ ụgwọ nkwupụta
N'ọnọdụ ọ bụla, akụkụ ọzọ nke a ga-edozi n'oge a bụ na ịkwụ ụgwọ nke nkwụghachi ụgwọ ziri ezi nke ewepụtara na ntanetị nwere ike ịme site na debit kpọmkwem, yana ndị emere ma nye ha n'ọfịs ndị thelọ Ọrụ thetụ Isi na ndị kwurula obodo nyere ikike, na-enyekwa ohere ịpee ego nke ịkwụ ụgwọ ahụ.
Nkwụnye ụgwọ akwụmụgwọ na kaadị akwụmụgwọ nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ọdịmma nke ndị ọrụ ya, n'ụzọ bụ isi n'ihi na ọ na-enye gị ohere ịkwụsị ịkwụ ụgwọ site na ịhọrọ ụzọ na-agbanwe agbanwe nke ego ị chọrọ ịkwụ kwa ọnwa ma, yabụ, jiri nnukwu enyemaka na njedebe nke ọnwa. Ya mere, onye na - ejide ya, dabere na ego ya, ga - enwe ike ịhọrọ n'etiti ịkwụ ụgwọ a kapịrị ọnụ na ụbọchị ọ bụla ọ bụla ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ pasent nke ego a dọtara. N'ọnọdụ abụọ a na-enwekarị opekempe, nke a ga-agbakwunye kwa ọnwa na mmefu ezinụlọ nke ndị ezinụlọ Spanish na-eche ihu na nke nwere ike ibuli ụgwọ ụgwọ ha.
Mana ị ga-eburu n’uche na kaadị ndị a nwere oge amara nke ga - enyere gị aka ijikwa mmefu ego kwa ọnwa gị. Ee, ọ bụ oge mgbe ị ga - akwụ ụgwọ na ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ n'ozuzu na kaadị akwụmụgwọ gị na-enweghị akwụ ụgwọ gị ụgwọ maka ụgwọ ndị a. N’uzo ụfọdụ, enwere ike itinye ya na oge ndọtị, ebe a na-achịkọta ebubo niile maka ọnwa na akaụntụ gị ma bụrụ nke a na-akwụ ụgwọ na ngwụcha ọnwa, na-enweghị mmakọ na mmasị na mmefu ndị a. Ha nwere ihe yiri ya na ego mgbazinye ego nke ụlọ akụ na ụlọ akụ na-echekwa maka obere oge, ọ na-abụkarị otu ọnwa ma ọ bụ ọtụtụ ọnwa. Ka i wee ghara inwe nsogbu ụtụ isi. Site na Treasury ị nwere ike gwa gị kalenda ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Etu esi kenye ugwo na Treasury nke ecommerce m?
Etu esi emepụta ecommerce?
Typesdị 5 nke SEM mkpọsa maka eCommerce